Izandiso ezi-4 ezintsha zeChannel zabaqulunqi | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Izandiso ezitsha ezi-4 zeChannel ezingafuneki ziphoswe nakuphi na ukuyila
I-Edge intsha Windows 10 i-Explorer, kodwa inesiphene esikhulu kwaye yiyo loo nto kunzima ukufumana ulwandiso ukuze ube nakho ukuthatha ithuba elingcono kwisikhangeli sewebhu. Kulapho iChannel okanye iFirefox inika iziphumo ezilungileyo zokuhlengahlengisa iimfuno zohlobo ngalunye lomsebenzisi wePC.
I-Chrome inenani elikhulu lezandiso ezinokwenza imisebenzi yethu ibe lula kwaye sisindise ngexesha elinesisa esinokuzisebenzisa kwezinye iimilo. Kwenzeka ntoni kukuba inani elikhulu lazo lihlala livela, xa sikhangela enye ejolise kuyilo kunye noyilo, kungcono ukubhenela kwiibhloko ezinjengezethu apho sikubonisa khona ezintsha ezine ongenakuphoswa zizo.
2 Thatha ezine
3 Gcina kugoogle
4 Umzuzwana weTransfer
Izolo bendiphawula ngobuhle Isixhobo sewebhu esisinceda ukuba sifumane umbala owenza owona mahluko ungcono kokhethiweyo, ke iColorTab, olu lwandiso lutsha ube liqabane elihle.
Olu lwandiso lweChannel lulula kodwa lusebenza ngokufanelekileyo ukusinika izimvo ezintsha zokudibanisa umbala ngalo lonke ixesha sivula isithuba esitsha kwi-Chrome. Umbono onomdla onika nekhowudi ye-HEX ngalo lonke ixesha sihamba ngaphezulu kombala ngamnye.
Olu lwandiso luya kukunceda dibana namagcisa amatsha kunye neefoto kwi-Instagram. Nje ukuba uyisebenze, ngalo lonke ixesha uvula ithebhu entsha, uya kubona ukuba iwindows yakho igcwaliswe njani ngababini ngababini yingqokelela yobugcisa obuvela kwi-Instagram.
Yaziswa le Epreli nguGoogle uqobo, Ukugcina kuGoogle kukuvumela ukuba ugcine amaphepha ewebhu Gqibezela ukujonga kamva. Nje ukuba ulwandiso lusebenze, kuya kufuneka ucofe kwiqhosha elongezwe kwibar yesixhobo. Uya kufumana zonke iiwebhusayithi ezigcinwe kwi www.google.com/gcina. Luluhlu lweekhonkco ezigciniweyo.
Ukuba uhlala usebenzisa i-WeTransfer, ngokuqinisekileyo uyabukhumbula ubugcisa abaqhele ukubusebenzisa ukubonisa ezona fayile zikhulu ufuna ukuzidlulisa. Nje ukuba ufake olu lwandiso, ngalo lonke ixesha vula isithuba esitshaUya kuba nomfanekiso osayizi opheleleyo wolunye loyilo olukhulu lwe-WeTransfer.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Izandiso ezitsha ezi-4 zeChannel ezingafuneki ziphoswe nakuphi na ukuyila
Zilungile kakhulu ezo uzivezayo, kum eyona ibalulekileyo ngaphandle kwamathandabuzo iPhepha elipheleleyo lokuThathwa kweScreen, ukubanakho kokufaka i-web iyonke ukuze ikwazi ukuyihlalutya ngaphandle kokuya nokuhla, kubonakala kumnandi, kulula kwaye kuyifezekisa into endiyifunayo. .
Enkosi ngegalelo Boox! Ndiyabulisa! Ndizakuyijonga :)
Bendingayazi inyani. Ndiyifumana iluncedo kakhulu. Ndiza kuyisebenzisa ukusukela ngoku. Enkosi
UJuan Galera -Ntengiso yeDijithali, ukubekwa kwewebhu kunye noyilo lwewebhu sitsho
Iposti egqwesileyo. Bendingalwazi olu lwandiso kwaye ngakumbi olu lusuka kuGoogle luya kuba luncedo kum. Enkoso ngokwabelana.
Phendula kuJuan Galera -Ntengiso yedijithali, ukubekwa kwewebhu kunye noyilo lwewebhu
Isigqubuthelo esihle seXesha esibonisa ingxaki yokukhuluphala eMelika